Tababbarka Macallin Dhexdhexaadinta Rishikesh india | Yoga Macalin Tababar India
200 Koors Tababbarka Macallinka ee Daaweynta Dhacdooyinka
500 Tababarka Macallinka Macallin ee Hindiya (Sare)
100 Koors Tababbarka Macallinka ee Daaweynta Dhacdooyinka
60 Koorso Tababbarka Macalliminta Khibrad-celinta
Dib-u-guurinta Dhaqanka ee Isbadelka Nolosha
Qoob ka ciyaarka Baxnaaninta Dareenka
200 oo Koorso Tababarka Macallinka ah ee saacadda Hatha Yoga
200 oo Koorso Tababarka Macallinka ah oo saacaddahihi ah Holistic Yoga
200 Koorso Tababar Tababar oo Yoga ah oo Isbadal ah
200 saacadood Yoga Macalin Tababar Rishikesh
100 oo Koorso Tababarka Macallinka ah oo saacaddahihi ah Holistic Yoga
Koorsada Tababarka Macallinka ee 100 saac oo isbadal ah
300 Koorso Tababbarka Macalinka
Dib u gurasho Yoga Holistic
Dib-u-guurinta Kirismaska ​​iyo Ciidda Masiixiga
Yoga Nidra Tababarka Macalinka Rishikesh India
150 saacadood oo tababar macallin ah Yoga Nidra
Faallooyinka Tababarka Macallinka ee Daweynta
Dib-u-eegista Tababarka Macallinka ee Yoga
Dib udhacyada Dib u eegista
Ku Saabsan Kooxda Farshaxanka Yoga
Ku saabsan Yoga muhiimad Rishikesh
Khibrad run ah
Ubaxyada Soo Kordhinta
Beddel Jirkaaga - Neeftaada - Maskaxda-Qalbigaaga
Keen macno, Ujeeddo iyo Nabad Noloshaada
Khibrad u yeelo Dareenka dhabta ah ee Yoga, Daweynta iyo Yoga Nidra
Kusoo dhawow Yoga Essence Rishikesh gagaarka Himalayas si aad uhesho nuxurka dhabta ah ee Yoga, Meditation, Yoga Nidra iyo Isbadalka Nolosha iyada oo loo marayo koorsooyinka tababarka macalimiinta Shahaadada Caalamiga ah sida:
100 Saacadood oo Macalin ah oo Tababar Macalin Hindiya ah
200 Tababbarka Macallimiinta Xannaanada Macallin Rishikesh India
200 Saacadood Yoga Nidra Tababarka Macalinka India (Level-1,2,3)
200 Hour Hatha Yoga Training Training Rishikesh India
200 Hour Holistic Yoga Training Training Rishikesh India
200 Tababar Yoga Macallin Indha-indhoole ah oo Hindiya ah
300 Saacadood Yoga Tababarka Macalin Rishikesh India (Advanced)
Koorsooyinka Khibradda & Nolosha-Is-beddelka
Khibrad u hel Farxadda Nolol Fiican
Koorsada Tababbarka Macallinka ee Isku-dhafka Rishikesh India
Baro sida loo dheellitiro Jirka-Maskaxda-Wadnaha, Sida loo baadho cabbirrada qarsoodiga ah ee nolosha, Baro xirfadda si aad wax u barato Wacyigelinta adoo ku biirey koorsadeena tababarka macallimiinta ee fikirka.
Koorsada Tababbarka Macallin Yoga Rishikesh India
Khibrad u helista dhabta ah ee Yoga iyo Isbedelka Nolosha, Khibrada Farxada Nolosha Holistic, Baro xirfadda si aad wax u barato Yoga adiga oo ku soo biiraya Koorsada Tababarka Macallinka ee Yoga.
Koorsada Tababbarka Macalinka ee Yoga Nidra Rishikesh India
Khibrad u bogsii bogsashada iyo nasashada, Baro talaabo talaabo talaabo ah oo loo baro yoga nidra, Ogoow sida loo dheelitiro Jirka-Maanka-Qalbiga adigoo ku biiraya koorsada Tababarka Macalinka ee Yoga Nidra.
Aan u dayno Yoga iyo Madbacada
Koorsada Tababbarka Noloshaada U Beddel
Yoga Essence Rishikesh waa hay'ad aan macaash doon ahayn oo iska diiwaan gashan iskuulka Yoga ee Isbahaysiga Yoga (RYS), iyo bixiyaha sii wadata waxbarashada ee Yoga Alliance (YACEP). Waxaan u heellan nahay fidinta aqoonta iyo sayniska ee yoga, ka fiirsashada qaabkeeda saxda ah iyadoo aan gaarsiineyno farxadda, nabadda, wada noolaanshaha, iyo wadajirka. Waxaan u fidinnaa guud ahaan, khibrad, iyo faa'iidooyin isbadal leh ee dhaqamada kaladuwan ee cilmiga ah iyadoo loo maro noocyo kala duwan oo koorsooyinka tababarka macallimiinta.
Maskaxda ku hay qiimahayaga ugu muhiimsan ee gudbinta khibradaha dhabta ah qof kasta oo nagala mid ah, waxaan bixinaa koorsooyin badan oo takhasus leh si looga faa'iideysto baahida shaqsi kasta;
100 saacadood oo ah Tababarka Macalinimada
200 saacadood oo ah Tababarka Macalinimada
500 saacadood Tababarista Macallimiinta
200 saacadood Yoga Nidra Tababarka Macalinka (Heerka I, II, III).
200 saacadood oo ah Tababarka Macallinka ee Hatha Yoga
200 saacadood Tababbarka Macallinka Dhabta ah
200 saacadood Tababbarka Macallinka Yoga
Koorsooyinkayaga tababarka waxay si fiican ugu daraaseyaan fahamka iyo dhaqammada sayidyadiisi hore iyo kuwa casriga ah si wax looga qabto maskaxda, qaab-nololeedka, arrimaha nolosha ee ragga casriga ah iyadoo lagu dhiirigelinayo ardayda inay dhisaan saldhig adag oo loogu talagalay nabadda gudaha, aqbalaadda, isku-filnaanshaha.
Waxbaristayada waxaa loo soo bandhigayaa hab debecsan oo farxad leh sidaa darteed geedi socodka waxbarashada iyo isbeddelka oo dhan ayaa si qoto dheer loogu dhejiyay iyadoo la sameynayo saldhig iyo meel adag si loo helo khibradda ficil ee dhammaan sideedda addimmada yoga, sida markii hore lagu sharxay Rishi Patanjali. Dhamaan howlaheena waxaa wax lagu baraa iyada oo la mideeyo labada mabaadiida aasaasiga ah ee sayniska Yogic jir iyo sayniska casriga ah ee bogsashada si looga dhigo mid dhameystiran, nidaamsan, oo quseeya nolosheena casriga ah.
Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan falsafaddeena asaasiga ah ee laxiriirta ku dhaqanka yoga, fadlan tixraac boggaga internetka ee ku saabsan waxa aan aaminsanahay inay tahay nuxurka saafi ah ee yoga.
Awoodda Yoga oo dhan, Rishikesh waxaa ka go'an inay bixiso khibrad tayo leh dhammaan cabbiraadaha si loo helo yoga qaab nololeed. Waxbaridayada, hoygeena, cuntada, yoga iyo hoolka nasashada oo ay weheliso jawiga saxda ah ee farxadda leh ayaa loo kobciyay si ay u fuliso mawduuca muhiimka ah ee ardayda la siinayo muuqaal khibrad leh oo ku saabsan dhaqamooyinka cilmiga leh iyo nolosha isbedelka nolosha.
Waxaan nahay ashram wadnaha waxaanna aaminsanahay bixinta ashraatka edbinta sida deegaanka u oggolaanaya ardayda inay si qoto dheer ugu baaraan jirkooda, maskaxdooda, iyo naftooda. Kooxdayada soo dhaweynta qoyska-la mid ah waxay had iyo jeer diyaar u yihiin inay caawiyaan oo taageeraan koritaankaaga oo dhan oo kaa dhigayaan inaad dareento guriga intaad joogtid.
Yoga Essence Rishikesh waxay bixisaa hoy wanaagsan oo nadiif ah oo raaxo leh intaad joogtid inta lagu gudajiro kooraska tababarka. Iskuulkayagu wuxuu ku yaal meel nabad ah oo aamusnaan leh, aamusnaan lehna goobta ugu hooseysa ee Lakshman Jhula, oo masaafo dhan 200 mitir u jirta Webiga Ganga. Waxay ku hareereysan tahay buuro Himalayan aamusan iyo dhirta cagaaran oo qurxoon oo hareeraheeda ah. Muuqaaladan quruxda badan ee buuraleyda ah iyo qulqulka dabeysha qabow ee qabow ee ka imaaneysa dhanka Ganges dhinaca waxay ka caawineysaa ka qeybgalayaasha nasashada dabiiciga iyo wacyigelinta.
Dhammaan qolalkayagu waxay ku qalabaysan yihiin qalab casri ah sida musqusha oo ku dhagan, kuleyl qabow iyo qabow, xarun hawo qaboojiye ah, Wi-Fi qol, biyo cabbitaan la miiray, iwm
Samyak Aahaar- cuntada saxda ah iyo isku dheelitirka waa qeyb muhiim ka ah dhaqamada cilmiga leh. Sidaa awgeed, waxaan u adeegnaa noocyo kaladuwan oo nafaqo leh, nafaqo leh, cuntooyin hadda la kariyey si aan kor ugu qaadno khibradaha dhibta leh. Alaab badan oo cunto ah ayaa ah cuntooyin dhaqameed caan ah oo ka kala yimid qaybo kala duwan oo Hindiya ah. Cunnooyinka waxaa loo sameeyaa si fudud oo sharaf leh oo jacayl weyn leh by karintayaasha qibrada leh ee ka yimid gobollada Himalayan.
Dhammaan waxyaabaha kujira, sida khudradda, miraha, iyo alaabada kale, waa kuwo si cusub loo soo iibsado xilli kasta iyo deegaan ahaanba qiimo wanaagsan oo caafimaad. Cunnadkeenu waxay leeyihiin isku-dhafnaan gaar ah oo ah qiimaha sattvic ee caadada yogic, qiimaha caafimaadka iyo bogsashada ee cuntooyinka Ayurveda & cuntooyinka dabiiciga ah, iyo qiimaha nafaqada ee miisaaman dheellitirka cuntada.
Erayada ka socda qalbiga ardayda
Dib-u-kobcinta maskaxdaada, Jirkaaga iyo naftaada
Faallooyinka fiidiyaha ee Yoga TTC & Yoga Nidra TTC
Faallooyinka fiidiyaha ee Tilmaanta TTC
Maxaa loo bartaa Yoga ama Tababbarka Macallimiinta Daweynta Hindiya
Isu dheellitir maskaxdaada, Jirkaaga iyo naftaada
India wuxuu la gariirayaa goobaha tamarta Yogic. Ku dhawaad ​​toban kun oo sano, kuwa wax raadinaya waxay gaareen meeshii ugu sareysay ee miyir-qabka halkan. Dabcan, waxay abuurtay dhul firfircoon oo tamarta dalka oo dhan ah. Gariirkoodu weli waa nool yahay, saameyntooda ayaa ku jirta hawada aad u badan; waxa kaliya ee aad ubaahantahay garasho gaar ah, awood cayiman si aad uhesho waxa aan muuqan ee ku xeeran dalkan qalaad. Markaad halkan Tababbarka Macallimiinta iyo Tababarka Macallimiinta Holistic Yoga ka dhigayso Holistic Yoga, waxaad u oggolaanaysaa Hindiya dhabta ah, oo ah safarka gudaha inay kugula soo xiriiraan. Waa meesha oo dhan, hal ayaa kaliya u baahan inuu fiiro yeesho! Miyir! Digniin!
RISHIKESH waa galid u socota Himalayas-qoto dheer - albaab u furan kuwa doonaya inay si qoto dheer ugu galaan safarkooda gudaha. Waxaa loo yaqaan "Tapo-Bhumi" oo macnaheedu yahay goobta dhaqan ee yoga iyo ka fiirsashada gabayo badan iyo quduusiin ilaa wakhtiyadii hore. Kumaan kun oo salaadiin ah iyo salaadiin ayaa booqday Rishikesh si ay uga fikiraan raadinta aqoonta sare iyo isku filnaanshaha. Beeraha tamarta yoolka iyo awooda ruuxi ahaaneed ee dhulka ayaa fududeeya safarkayaga gudaha. Baro waxbadan oo kusaabsan safarkayaga gudaha iyo koorsooyinka isbedelka sida 200 saac ee Yoga Tababarka Macallinka iyo 200 oo ah Barnaamijyada Tababbarka Macallinka.
WAA MAXAY KU SAABSAN KU SAABSAN
Yoga Essence Rishikesh, waxaan si gaar ah qiimo ugu saareynaa khibradaha iyo tayada nolosha isbeddelka ah ee yoga, yoga nidra iyo ka fiirsashada. Halkii aan diiradda saari lahayn kaliya dhinacyada macluumaadka iyo farsamada ee dhaqamada aan barano, waxaan higsaneynaa inaan ka caawino ardayda sidii ay u horumarin lahaayeen fikradaha cusub ee loogu talagalay nabad, farxad iyo nolol wada noolaansho si ay ugu gudbin karaan fahamka kuwa kale.
Iskuulkayagu wuxuu hoy u yahay dadka jecel yoga ee ka kala yimid adduunka oo dhan oo ugu yeeray barnaamijyadeena "isbadal dhab ah oo xagga ruuxa ah iyo nolosha". Tani waa sababta oo ah waxaan aad u taxaddarineynaa si aan u siino meel aamin ah, raaxo leh, iyo soo dhaweyn wanaagsan oo loogu talagalay ardayda inay si qoto dheer uga dhex shaqeeyaan lakab Jirka-Neefta-Maskaxda si loo ballaariyo Feejignaanta.
Iskuulkeena yoga wuxuu leeyahay khibrad weyn oo ku saabsan dhaqamada yoga sare sida yoga nidra, meditation, chakra, kundalini iyo unugyada khiyaanada leh. Marka laga soo tago barnaamijyada tababarka macallinka yoga, waxaan bixinaa koorsada tababarka macallin yoga, yoga nidra koorsooyinka tababarka macallimiinta (heerka 1, heerka 2, heer 3), koorsooyinka tababarka macallimiinta (100, 200, 500 saacadood), iyo in ka badan.
Tababbarkayaga 200 ee saacadda Macallinka iyo 200 ee koorsooyinka Tababarka Macallimiinta Tababarka ayaa leh qiime gaar ah marka loo eego koorsooyinka tababbarka macallimiinta yoga kale ah maxaa yeelay waxaan bixinnaa 50 saacadood oo dheeraad ah oo ah tababar macallin Yoga Nidra (oo leh shahaado) oo u oggolaaneysa ardaydeena inay ka caawiyaan dadka aqoonta sare leh.
Koorsooyinka isbeddelka nolosha iyo koorsooyinka khibradda leh oo leh qaab barista sayniska.
Kaliya iskuulka India ayaa bixiya koorsada Tababarka Macalinka ee Yoga Nidra
Farsamooyinka iyo tababbarku waxay daboolaan caadooyin yougo iyo dariiqooyin kala duwan
Kooxda Muhiimka ah ee Yoga
Dib u xooji maskaxda, Jirka & Nafta
Dhexdhexaadinta Hogaanka iyo Macallinka Yoga Nidra
LAGU KHUDBADAY LAGU BAAHAY LUUQADAHA LACAG LA'AAN AH OO LACAG LA'AAN AH
Anigoo ah macalin Yoga, waxaan doortay inaan raaco tababarka macalinimada ee 200 saacadood ee barashada ah ee Yoga Essence Rishikesh maxaa yeelay waxaan doonayay inaan barto isla markaana aan la kulmo farsamooyin kala duwan oo ka fiirsasho ah oo tababarku bixiyo farsamooyin kala duwan oo aan ahayn iskuulada kale. Kaliya maahan waxaan soo maray oo aan bartay dhaqammo kala duwan oo aan ku fikiro laakiin sidoo kale waxay ii noqotay geedi socodkayga isbedelka. Waxaan ku helay farxad iyo deganaan; Waxay si qoto dheer u sii ambaqaadday safarkayga gudaha si aan khibrad ugu yeesho qofka aan runtii ahay? Kooxda yar ee barnaamijka ayaa noo oggolaatay inaan xiriir dhow la yeelanno ardayda kale ee wax wada dhigta oo suuragelisay macallimiinta ugu wanaagsan inay bixiyaan hagitaan shaqsiyeed. Macallimiintu waxay ku nool yihiin waxay barayaan oo hadda waan fahmay wax badan oo ay tahay macnaheedu inuu noqdo yogi. Hadda waan ogahay sida aan u doonayo inaan baro yoga dalkayga hooyo anigoo faraxsan, hees iyo qoob-ka-ciyaaraya. Runtii waxaan kugula talinayaa koorsadan iyo iskuulkan. Waan ku faraxsanahay inaan raacay. Namaste! Mario.
WAAN KU FARAXSANAYO, WAA I BAAQAYSAA WAA I BILAAHAYna SI AAN UGU HESHO MYSELF
Waxa aan soo maray @ Yoga Essence Rishikesh markii aan ku biiro 200 oo saacadood oo ah koorsada tababarka macallin Yoga laguma sharixi karo ereyo. Waxay ahayd waayo-aragnimo sixir ah oo ku saabsan nolosha, maskaxda, jirka iyo nafta. Ku saabsan sida si qoto dheer looga dhex dhex galo iyo sida loo sii dhex galay ka fiirsashada, iyo sida loo sii daayo. Waxaad u baahan tahay inaad dareento, inaad muujiso, inaad muujiso, qoob ka ciyaarto, qayliso, qayliso, boodboodo, inaad fahanto waxa Swami Samarth ay isku dayeyso inay waxbarashadeeda ku soo qaadato. Nasiib ayaan ku leeyahay inaan ka mid ahay ardaydiisa sababtoo ah haddii aad rabto inaad noqoto macallin yoga, waxaad u baahan tahay inaad naftaada caawiso marka hore, si aad u caawiso kuwa kale. Sidee ayaad dadka kale u dejin kartaa, haddii aadan naftaada xasilin? Naftayda waan ogaaday, waxaan isu beddelay waxaanan bartay inaan runtii jeclaado naftayda iyo dadka kale shuruud la'aan. Isugeyn waan ku mahadcelinayaa wixii aan ku helay Yoga Essence. Waan ogahay in tani ay ahayd uun bilowgayga safarka Yoga, laakiin biloowgaasi wuxuu igu saabsanaa aniga, waxayna saameyn weyn ku yeelatay ogaanshaha waxa ku jira aniga iyo sida aan u gali karo yoga iyo ka fikirka. Mahadsanid Namaste!
BAADHITAAN, KHUDBADNIMADA GUUD iyo KORITAANKA QOYSKA
Yoga Capital of India, Rishikesh Waxaan la kulmi kara nuxurka yoga aniga oo iska diiwaangelinaya 200 saacadood Yoga Tababarka Koorsada Tababbarka ee Yoga Essence, Rishikesh aniga oo raacaya hagista jacaylka Swami Samarth. Kooxda abidkood ee saaxiibtinimo iyo taakuleynta ah ee Joy, Anoop, Dhiraj, Ranjan, Prasad waxay sameyn kartay tababar 200 oo yoga ah oo macallin ah oo qulqulaya si la mid ah qulqulka mucjisada weyn ee Ganga. Waxaan dareemayaa inaan mudan yahay maaddaama koorsada lafteeda ay ka badan tahay wixii aan ka filnayey. Arinta ka dambeysa jadwalka adag ee xirxiran iyada oo aan isbuuciiba la maqneyn waxay ahayd u ​​jeeddada lagu hayo tamarta kooxda si ay u gaaraan inta jeer ee isbeddelka heerka shakhsiga ah waxaanna dareemay inay tahay ujeeddada dugsiga. Dhamaadka dhammaystirka koorsada oo ay weheliso Shahaadada, waxaan lahaan karnaa 'khibradda transcend' ee koritaanka gudaha iyada oo loo marayo dhaqangelinta fikradaha kaladuwan ee sida dhabta ah looga qaadanayo hadiyadda. Aniga aragtidayda ah "khibrad-gacan-qabasho kaliya kadib, ka-qaybgale wuxuu noqon karaa Macallin Fiican" waa aasaaska Tababarka Macallinka Holistic Yoga ee Yoss Essence Rishikesh. Salaaddayda qumman ee loogu talagalay Kobaca Caafimaadka Qumman ee kuwa ku biiraya koorsada iyo dugsiga. Runtii kooxda oo dhan ayaan ku ammaanayaa jacaylkooda iyo taageeradooda inta aan joogi jiray oo dhan. Pranam, Jacayl
ISKU DIYAARINTA, TUURINTA IYO FASALKA KHATARTA
Fikradihii aan ka helay intii aan sii joogay oo aan wax ku bartay Yoga Essence waa nolosha oo is beddelay. Ka dib markii aan adduunka oo dhan ka raadsaday dugsi sax ah / Ashram / akadeemiyad loogu talagalay horumarka safarkayga gudaha aad ayaan ugu faraxsanahay inaan helay Yoga Essence. Jawiga dugsiga waa mid la yaab leh, aad u nadiif ah, oo ay ka buuxaan tamar wanaagsan. Qeybta ugu fiican waa kooxda iyo maamulka iskuulka, oo had iyo jeer diyaar u ah inay caawiyaan. Farsamooyinka lagu dhigo Yoga Essence waa wajiyo badan oo isbadal leh. Swami Samarth Waa inaan idhaahdaa waxaad tahay macalin cajiib ah qaybta ugu fiicanina waa waxa aad barato, waad nooshahay. Khibradaada iyo aragtidaada waa iftiimayaan waxaanan aaminsanahay in Yoga Essence uu qaban doono shaqo cajiib ah mustaqbalka soo socda. Waa inaan ku daraa in kooxdaada oo ka kooban Joy, Prasad, iyo Ranjan ay yihiin kuwo cajiib ah raggaan oo dhami waa jacayl, nabad iyo wada noolaansho. 200 saacadood ee koorsada tababarka macalinimada ayaa buuxisa dhamaan himilooyinkeyga waxa aan raadinayay. Waxyaabaha ku jira koorsada waxay taabanayaan dhinacyo kala duwan oo farsamooyinka wax looga fiirsado kuwaas oo ah kuwo aad u firfircoon isla markaana buuxinaya himilooyinkii doone.
WAA FANSALKA FARSAMADA OO LAGA BADALO TARJUMADA TABABBARKA TABABBARKA
Tababbarka macallinka ee Yoga Nidra ayaa aniga lafteedu culeys igu ahaa bilowgii sababtoo ah walaaca iyo welwelka igu soo kordhay si aan u aado nasasho qoto-dheer iyo deg-deg. Laakiin markii ay maalmuhu sii dhammaanayeen, Waan fahmay sababaha sababi kara arrimahayga oo waxaan u dhaqaaqay howlahan, waan awoodaa inaan siidaysto sababo la xiriira fadhiyada Yoga Nidra iyo ku celcelinta nashaadaadka firfircoonaanta. Waxay ahayd waayo-aragnimo cajiib ah in la fahmo, wax lagu barto oo la dareemo tallaabada habab-tallaabo ee ku-dhaqannada Yoga Nidra iyada oo loo eegayo seynisyahannada Yogic-ga caadiga ah iyo aragtida sayniska ee casriga ah laga soo qaatay Swami Samarth. Waxay ahayd isku-dheelitir fiican oo dhexmara habdhaqanka firfircoon ee yoga iyo ka-fiirsashada. Waxbaristu aad ayey waxtar u lahayd waxayna gacan ka geysteen in si qoto dheer loogu dhaqan galo isla mar ahaantaana lagu barto xirfada lagu baro. Luud naxariis iyo jilicsanaan xagga waxbarida ee macallimiinta wax ka barta iyo kuwa yoga oo aad loo qadariyo. Cunnada iyo shaqaaluhu aad bay u fiicnaayeen oo saaxiibtinimo bay lahaayeen. Cunto aad u dhadhan fiican oo macaan, runti ku raaxaysatay.
Akhri Caddeymo Dheeraad ah
Fahamka Jirka, Maskaxda, Qalbiga & Maskaxda
MUHIIMKA YOGIC EE DAAWADA SILENCE
Waxaa laga yaabaa 3, 2020Waxaa laga yaabaa 5, 2020yogaessencerishikesh
KIRTAN YOGA | DAAWADA KIRTAN
MANTRA YOGA | DAAWEYNTA MANTRA
February 11, 2020Waxaa laga yaabaa 5, 2020swamidhyansamarth
SYLLABUS OF 200 HOUR YOGA TEACHER CARRUURTA
Waxaa laga yaabaa 28, 2019Waxaa laga yaabaa 28, 2019swamidhyansamarth
FARSAMADA FARSAMADA OO KU SAABSAN DHAQANKA
Waxaa laga yaabaa 18, 2019February 11, 2020swamidhyansamarth
VIGYAN BHAIRAV TANTRA: Encyclopedia of Techniques Meditation
Waa maxay Raja Yoga? Isbarbar dhigga Raja Yoga iyo Hatha Yoga
April 15, 2019Waxaa laga yaabaa 5, 2020swamidhyansamarth
Tapovan Hoose (Dhabarka gadaal u noqoshada Dewa),
Nagu soo dir: [Email ilaaliyo]
Na soo wac: (+ 91) 7409349919 / (+ 91) 8954559984
Dib u eegista Ardayda Yoss Essence
Koorsooyinka Tababbarka Macallimiinta
200 Saacadood Hatha Yoga Tababarka Macalinka Rishikesh
200 saacadood Holistic Yoga Tababarka Tababarka Rishikesh
300 saacadood Yoga Macalin Tababar Rishikesh India
050 Saacadood Yoga Nidra Tababarka Macalinka India (Level-I)
150 Saacadood Yoga Nidra Tababarka Macalinka India (Level- II & III)
200 saacadood oo ah Tababbarka Macalinka ee Daweynta Rishikesh India
500 saacadood oo ah Tababbarka Macalin Tababar India (Horumar)
100 saacadood oo ah Tababbarka Macalinka ee Daweynta Rishikesh India
100 saacadood Koorso Tababbarka Macallinka oo Dugsi ah
Dib-u-guurinta Dhex-dhexaadinta Is-beddelka
08 Maalmood Holistic Yoga Retreat
MUHIIMKA YOGIC EE DAAWADA SILENCEWaxaa laga yaabaa 3, 2020
KIRTAN YOGA | DAAWADA KIRTANFebruary 11, 2020
MANTRA YOGA | DAAWEYNTA MANTRAFebruary 11, 2020
SYLLABUS OF 200 HOUR YOGA TEACHER CARRUURTAWaxaa laga yaabaa 28, 2019
FARSAMADA FARSAMADA OO KU SAABSAN DHAQANKAWaxaa laga yaabaa 18, 2019
Waa maxay Yoga? - Falsafad ama AnshaxJuly 10, 2018
DAAWEYNTA CHAKRA: Ficillada Daweynta ee Xarumaha Tamarta-Cilmi-nafsigaApril 14, 2019
Ujjayi Pranayama: Dhaqanka Neefsashada ee NaxwahaApril 7, 2019
Yoga Transformational Yoga: Furaha Masterka ee IsbedelkaNovember 16, 2018
FARSAMADA PRANAYAMADecember 25, 2018
Yoga muhiimad Rishikesh © 2019 | Dhamaan Xuquuqda Ayaa Leh